Tsy fahamatorana amin’ny firotsahan-kofidina: nisy ireo kandidà tsy manam-bola sy tsy nahafeno dosie | NewsMada
Tsy fahamatorana amin’ny firotsahan-kofidina: nisy ireo kandidà tsy manam-bola sy tsy nahafeno dosie
Tsy matotra nefa mihevitra ny ho mpitantana. Nisy amin’ireo kandidà nanatitra antontan-taratasy filatsahan-kofidiny etsy amin’ny HCC Ambohidahy no tsy nahafeno ny fepetra tokony arahina. Mazava izany fa hihintsana izy ireny ary tsy afaka hifaninanana amin’ny fifidianana.
Tao ny kandidà tsy nanana afa-tsy taratasy telo aman’efatra amin’ireo antontan-taratasy 16 tokony ho noforonina. Ao koa ireo tsy mbola ampy na tsy feno ny vola 50 tapritra Ar tokony ho antoka amin’ny firotsahana. Ny hafa indray, eny an-toerana vao lasa mihazakazaka manao dika mitovy ny antontan-taratasy ilaina amin’izany.
Efa zatra ny ady gasy, miandry farany hatrany, anefa ny maro amin’ireo kandidà.
Tara tamin’ny fametrahana ny antontan-taratasy
Anisan’izany ny kandidà eo anivon’ny Sempama Nosy, Ravohitra Claude. Efa dila ny tamin’ny 5 ora hariva omaly ary efa nihidy ny vavahady etsy Ambohidahy vao tonga. Tsy afaka nandray azy intsony ny tompon’andraikitry ny HCC. Tsy fahamatorana avokoa izany.
Efa nampitandrina anefa ny eo anivon’ny HCC fa tsy tokony hiandry fotoana farany ireo kandidà vao hanatitra ny antontan-taratasiny satria matetika, misy ny tokony hahitsy sy hamboarina.
Kandidà maherin’ny 40 tamin’ny taona 2013
Etsy andaniny, tsy fantatra koa ny tena manosika ny sasany amin’izy ireo ho kandidà na ho fisehosehoana fotsiny ihany na tena hirotsaka. Mbola niverina nirotsaka na efa nailiky ny HCC aza tamin’ny 2013 ny kandidà sasany amin’ireo. Tsy mahagaga koa anefa izany satria efa zary lasa kilalaon-jaza ny fiainam-pirenena sy ny fanaovana politika eto amintsika. Efa maherin’ny 40 tahaka izao ihany ny kandidà nirotsaka ny taona 2013, saingy nahintsan’ny HCC ny sasany ka 33 sisa ireo afaka nifaninana tamin’izany.
Kandidà niala an-daharana
Nisy ireo kandidà niala an-daharana tamin’ny fotoana farany. Anisan’ireny, ohatra, ny filoha nasionaly Monima, i Monja Roindefo. Teo ihany koa ny filoha nasionalin’ny Ram, i José Vianey. Eo koa ny filoha nasionalin’ny Vitantsika, Raharimanana Patrick.
Anisan’ny antony izay fialana an-daharana izay, ny amin’ny fanahiana korontana amin’ny fifidianana. Eo koa ny mbola fiandrandrana fandaminana na fifampidinihana mialoha ny hiatrehana ny fifidianana. Miara-dalana amin’izany ny fiandrasana na fangatahana fanorenana ifotony.
Na izany aza, amin’ny lafiny politika, eo ny tsy fahatokisan-tena manoloana ireo kandidà. Miharihary avy hatrany ny hery sy ny tanjaky ny kandidà sasany, indrindra ny mety ho vato azony. Mbola eo koa ny tsy fahazoana na tsy fananana ny enti-mihetsika. Mibaribary ny herin’ny vola amin’izao fifidianana izao.
Synèse R. sy R. Nd